မော်နီကာဆန် | | ရုပ်ပုံများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လှပသောကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေထိုင်သည်။ ထိုတွင်အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များစွာသည်အတူတကွတည်ရှိပြီးရှင်သန်ရန်နှင့်သူတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ရသောကမ္ဘာတွင်ရှင်သန်ရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့တာမှာအရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်ညမှာပြပွဲကဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ကြိမ်တည်းသာဇာတ်ကောင်က ကြယ်မိုsky်းကောင်းကင်.
ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်သည်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာမဟုတ်ဘဲအချည်းနှီးမဟုတ်ဘဲဘဝရှိနိုင်သည့်အခြားကမ္ဘာများရှိကြောင်းမေ့ရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါတစ်ရံတွေ့မြင်ရသည့်သန်းပေါင်းများစွာသောတောက်ပသောအစက်များသည်အမှန်တကယ်တွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကတည်ရှိခဲ့သောကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်များ၊ ကြယ်တံခွန်များနှင့် nebulae များဖြစ်သည်။
3.4 ခုနစျ Krttika
4.1 Monfragüeအမျိုးသားဥယျာဉ် (Cáceres)
4.2 Mauna Kea စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး (ဟာဝိုင်ယီ)
4.4 သိနာသဲကန္တာရ (အီဂျစ်)
ညကိုငါကြိုက်တယ် မှုတ်သွင်းထားသောတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသည်အံ့ is စရာကောင်းသည်။ ကောင်းကင်သည်ကြည်လင်ပြီးစကြာ ၀ ofာ၏အလွန်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုသင်မြင်တွေ့ရလျှင်၎င်းသည်မယုံနိုင်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ်နက္ခတ္တဗေဒပရိသတ်များခံစားခဲ့ရသောသို့မဟုတ်ထိုကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်သောခံစားချက်များနှင့်ထိုခံစားမှုများကိုလည်းပထမဆုံးနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။
နက္ခတ္တဗေဒပညာသည်အလွန်သိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်သည် တည်ရှိပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်လူ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးသည်မိုးကောင်းကင်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ရည်စူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Stonehenge ဖြစ်ပြီးဘီစီ ၂၈၀၀ ဝန်းကျင်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြီးမားသောဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုကနေကြည့်ရှုအားပေးလျှင်, အရာ, သောနွေရာသီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအပေါ်နေထွက်၏ ဦး တည်ရာအတိအကျကိုညွှန်ပြ.
အီဂျစ်တွင်ပိရမစ်များတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဘီစီ ၂၅၇၀ ခန့်တွင်သူတို့၏လက်ရာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူတို့ Orion ရဲ့ခါးပတ်နှင့်အတူ alignment ကိုခဲ့ကြသည်ဒါ C. ။ လက်ရှိတွင် Orion ကြယ်သုံးပွင့်သည်ပိရမစ်များနှင့်ဒီဂရီအနည်းငယ်ကွာခြားသည့်ထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်။
သို့သော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးသည့်နောက်တွင်၊ မေလ ၁၆၀၉ တွင် Galileo Galilei သည်ကောင်းကင်ရှိအရာဝတ္ထုများကို ပိုမို၍ အသေးစိတ်လေ့လာရန်အတွက်အသုံးပြုမည့်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။။ ထိုအချိန်ကဟော်လန်တွင်ဝေးကွာသောအရာဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သို့သော် Galilei ၏ပုံအားရှစ်ကြိမ်မှကိုးကြိမ်အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အတွက်နောက်ထပ်အရာဝတ္ထုများစွာကိုမြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်လေ့လာနိုင်သမျှကိုလေ့လာရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။ အဲဒါကိုကောင်းကင်မှာတွေ့နိုင်တယ်
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံး၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်မှာကမ္ဘာမြေကြီးမဟုတ်ဘဲနေသာဖြစ်ကြောင်းလူအနည်းငယ်ကသာသိရှိနိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ ထိုအချိန်အထိပထဝီဗဟိုအချက်အလက်ကိုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ စကြဝtheာ၏။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ထပ်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်မှန်ဘီလူးရှိသည်။ လူ့မျက်စိသည်မမြင်ရသောမျက်စိဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည့်အရာများကိုမြင်ခြင်းနှင့်မရောင့်ရဲနိုင်သော်လည်း၊ ကြယ်တံခွန်များ၊ nebulae များနှင့်ရာသီဥတုကောင်းမွန်လျှင်ပင်အနီးဆုံးနဂါးငွေ့တန်းများကိုပင်တွေ့မြင်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသောသူများသည်ပိုပိုများလာသည်။ သို့သော်ယခင်ကမတည်ရှိခဲ့သောပြlightနာတစ်ခုမှာအလင်းညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်။
အလင်းလေထုညစ်ညမ်းမှု ညံ့သောကောင်းကင်ပြာ၏အရည်အသွေးကိုညံ့ဖျင်းသောမြို့ပြအလင်းရောင်အဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ လမ်းမီးများ၊ ယာဉ်များ၊ အဆောက်အ ဦး များ၏မီးများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကြယ်များကိုခံစားရန်အဟန့်အတားဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတိုးလာတာနဲ့အမျှအခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်။
ဒါပေါ့ ဟုတ်ကဲ့။ အပြင်ဘက်အလင်းကိုနာရီအနည်းငယ်သာဖွင့်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောမီးသီးများသုံးခြင်း၊ အတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားခြင်း (ဥပမာသစ်ပင်အခက်များကဲ့သို့) အတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အလင်းပြန့်ကျဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖန်သားပြင်ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောအရာများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအလင်းညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကြယ်များသည်အမြဲတမ်းလူသား၏ဒဏ္myာရီပုံပြင်များကိုဖန်တီးခဲ့သောယုံကြည်ချက်များ၏အရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Pleiades (ဂရိစကားတွင်“ ချိုးငှက်များ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသောစကားလုံး) ဖြစ်သည်။ ရှေးဂရိ Orion မုဆိုးသည် Pleione နှင့်သူ့သမီးများကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြောပြသည်။ သူမမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းနောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Zeus သည်ချိုးငှက်များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသောအခါအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Pleiades အဖြစ်လူသိများသောကြယ်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်လာရန်ကောင်းကင်သို့ပျံသန်းခဲ့သည်။
Pawnee အဆိုအရမြောက်အမေရိက၏ဌာနေတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ ဘုရားသခင် Tirawa သည်မိုးကောင်းကင်ကိုဆောင်ရန်ကြယ်များကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အချို့ကကမ္ဘာမြေ၏မျိုးပွားမှုကိုသေချာစေသည့်မိုးတိမ်များ၊ လေနှင့်မိုးတို့ကိုဂရုပြုကြသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့သေစေသည့်သေစေနိုင်သောမုန်တိုင်းများအိတ်တစ်လုံးနှင့်ကြုံခဲ့ရသူများလည်းရှိသည်။
အဆိုပါ Mayans ယုံကြည်သည် နဂါးငွေ့တန်းသည်စိတ်ဓာတ်များကိုမရဏကမ္ဘာသို့လမ်းလျှောက်စေသည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ခေတ်၏အတိုးတက်ဆုံးသောလူ့ယဉ်ကျေးမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောဤလူများ၏ပြောပြချက်များသည်ကြယ်များ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ သူတို့အတွက်ကောင်းကင်သည်အလွန်ကြည်လင်နေလျှင်ယနေ့ထိမြင်နိုင်သောနဂါးငွေ့တန်း၏ဒေါင်လိုက်ကြိုးသည်ဖန်ဆင်းခြင်း၏အချိန်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အိန္ဒိယမှာအဲဒါကိုယုံကြည်တယ် Ursa Major ၏ကြယ်များသည် Rishis ဟုခေါ်သည်။ မီးဘေးနတ်ဘုရား Agni သည် Krrtika ညီအစ်မများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အထိမြောက်ပိုင်းကောင်းကင်တွင်သူတို့နှင့်အတူ Krttika အစ်မခုနစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သောပညာရှိခုနစ်ပါး။ သူခံစားခဲ့ရသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမေ့ပျောက်ရန်ကြိုးစားရန် Agni သည်တောတောင်သို့သွားသော Zeta Tauri ကြယ် Svaha နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Svaha က Agni ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူလုပ်ခဲ့တာကိုသူ့ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ရန်မှာ Krrtika အစ်မများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Agni သည်နောက်ဆုံးတွင် Rishis ၏ဇနီးများကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲ Svaha မှာသားတစ်ယောက်ရသွားတယ်။ ဒါကြောင့် Rishis ရဲ့ဇနီးခြောက်ယောက်ကသူ့အမေဖြစ်တယ်ဆိုတာကောလာဟလတွေပျံ့နှံ့သွားတယ်။ ယောက်ျားခုနစ်ယောက်ထဲကခြောက်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ဇနီးတွေကိုကွာရှင်းပြတ်စဲစေခဲ့တယ်။
Arundhati သည်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူ နေ၍ ကြယ် Alcor ဟုခေါ်သည်။ ကျန်ခြောက်ယောက်သည်ထွက်ခွာသွားပြီး Pleiades ဖြစ်လာသည်။
ပုံ - Juan Carlos Casado
Mauna Kea စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး (ဟာဝိုင်ယီ)
ပုံ - Stefan Seip
ဒါပေမယ့်…ငါမခရီးသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီကိစ္စမှာအကောင်းဆုံးအရာက refracting telescope ကိုဝယ်တာပါပဲ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည် (သန့်ရှင်းအောင်မထားပါက except) ။ ဤတယ်လီစကုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်၎င်းမှထုတ်လွှတ်သောအလင်း၏အလင်းယိုင်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ အလင်းရောင်ခြည်သည်သစ်သားအားဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။
စတင်၍ အလင်းပြန်မှုအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း၏ဈေးသည်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီး ၉၉ ယူရိုလောက်တန်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ရုပ်ပုံများ » မိုးကောင်းကင်မိုးကောင်းကင်
Uriel esquivel ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီလများ (လေ၊ ရေ၊ မီး၊ ကမ္ဘာမြေ) နှင့်…အရေးမပါသောတစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်၏ဂုဏ်အသရေသည်ormရာမ၊ ကြယ်ပွင့်ဘုရင်၏စွမ်းအားကကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ဆုလက်ဆောင်များကို "မီးပွားများ" ဖြင့်ပစ်ချပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအားအတွက်ဝင်ရိုးစွန်း Auroras များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားအံ့အားသင့်စေခြင်းနှင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်နောက်ခံတွင် Ether ကိုပေးသည်။ သာလွန်မြင့်မားသောနည်းစနစ်များသည်သာလျှင်ဤအဖိုးတန်မှုအနည်းငယ်ကိုသာတန်ဖိုးထားနိုင်သော်လည်းဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။
Uriel Esquivel အားပြန်ကြားပါ